China Ezigbo Ogo 10kva Nrụpụta Diesel Generator Nrụpụta na ụlọ nrụpụta | Saselux
Ike gosiri （kva）: 10
Voltage mmepụta nke gosiri (V): 230
Ugboro ugboro （hz）: 50
Oke ọsọ (rpm): 3000
Ihe ngosi ike dị elu: 0.8 （Lag n'azụ）
Egosiri ugbu a （A）: 14.4
Klas mkpuchi: Klas H
Klas nchedo: IP23
Ọnọdụ njikọ: sistemụ waya ise nwere ụzọ atọ
Ibu otu: 150
Ogo otu: 850/600/800
NoisedB (A): 69
Oriri mmanụ ụgbọala (g/KWH): 208
Ọnọdụ mmalite/nkwụsị: mmalite eletriki
Oge nwelite otu nkeji （H）: ＞ 10000
Ọnụ ọgụgụ cylinders
Ụkpụrụ njikwa ọsọ
Njikwa ọsọ elektrọnik
N'iji ngbanwe mkpokọta mmanụ mmanụ ， ihe nzacha mmanụ na ihe nzacha ikuku
Ihe mkpuchi na anwụrụ ọkụ
N'iji igwe eji eme mkpọtụ mkpọtụ mkpọtụ dị elu ， mgbe muffler, enwere ike belata mkpọtụ otu site na 15 ~ 20dBA
12V DC malite
A ahịhịa onwe onye mkpali
Rotor, klaasị mkpuchi mkpuchi stator
Ogo ike ọkụ eletrik
klasG3 ， GB/T2820
Ọnụego mgbanwe voltaji (%)
Usoro nhazi voltaji na -agafe agafe (%)
Ụkpụrụ nhazi voltaji kwụsiri ike (%)
Oge nkwụsi ike voltaji
Ugboro ugboro (RPM)
Ọnụego mgbanwe ugboro ugboro (%)
Ọnụọgụ mgbanwe na -agafe agafe ugboro ugboro (%)
0 ~ 5% (mgbanwe)
Oge nkwụsi ike ugboro ugboro
Ọnụ ọgụgụ mgbagọ nke Waveform
Unit Ọdịdị voltaji ọnọdụ ọnọdụ adịghị
95% ~ 105% gosiri voltaji
Soro faịlụ igwe
Nkọwa nke injin dizel
Onye na -emepụta mmanụ dizel na -etinye nrụnye, iji ya na ndozi ya
Akwụkwọ ikike ngwaahịa
Usoro ahịa na usoro ụzọ ahịa
Ọrụ azụmaahịa nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịchekwa ụlọ ọrụ, na-ahụ maka njikwa nke nzukọ a na-ere ahịa, na-ahụ maka ire ngwaahịa na ahịa mba isi mmezi yana ọrụ mberede, ọrụ mmezi nke ụlọ ọrụ na akụkụ niile. nke ụlọ ọrụ nlekọta mba ahụ bụ maka ijikwa ya;
Soro ụkpụrụ nke ije ozi: Nke mbụ, bute ụzọ n'ịrụ ọrụ ụlọ, na -edozi nsogbu n'oge; nke abụọ bụ nzaghachi dị mma maka ndụmọdụ onye ọrụ; Nke atọ, dị ka iwu si edozi esemokwu dị mma;
Soro akwụkwọ ozi onye ọrụ, oku n'oge, ebe niile maka ndị ọrụ;
Mee nzaghachi ozi njirimara nke onye ọrụ nke ọma, mejuputa nzaghachi dị mma, sistemụ kaadị nsuso mma;
Na ire ahịa nke mpaghara mepere emepe ngalaba na -ahụ maka ngwaahịa, ka ọrụ ọnụ ụzọ gafere elekere 12.
Kọwaa ọdịnaya ọdịnaya ahịa mgbe emechara ya
（1） Nye ngwaahịa ọrụ, ntuziaka ntuziaka;
（2） Nye akụrụngwa, ngwa;
（3 training Ọzụzụ n'efu maka ndị ahịa wee nye 1-2 ndozi nke ọrụ eletriki;
（4 period Oge akwụkwọ ikike nke otu afọ ma ọ bụ 1000 awa ọrụ (nke ọ bụla buru ụzọ bịa), enwere ọdụ ọrụ gburugburu ụwa maka IWS (International Warranty Service), ntụpọ niile kpatara ọdịda ọdịda nke na -enye ọkụ setịpụrụ nrụpụta dị ka mmejuputa akwụkwọ ikike mbụ. , arụmọrụ mperi mmadụ ma ọ bụ ndị ọzọ anaghị eso ihe eji arụzi ihe mbụ adịghị n'ime oke mmesi obi ike a.
（5） Nye ndị ọrụ ojiji ngwaahịa na ozi ka mma n'oge.
（6） Ịrụ ọrụ dịịrị onye ahịa iduzi ngwaahịa nrụnye na nrụzi;
（7 products Ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị na-eji usoro ịre ahịa ozugbo, dịka iwu nke azụmahịa azụmaahịa mba ụwa si dị, na-akpụ netwọkụ ahịa ahịa siri ike na netwọ ọrụ ahịa mgbe ọ gbasịrị. Enwere ike ree ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ na ndị nnọchi anya azụmaahịa mba niile na ịnye ọrụ ahịa mgbe emechara. Ahịa nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ime ụlọ ọrụ azụmahịa dị nso iji nye ọrụ ahịa mgbe mba niile gachara.
Nkwekọrịta Ọrụ mgbe irere ahịa gasịrị
Companylọ ọrụ anyị na-eche na ihe nrụpụta dị elu nwere naanị ọrụ dị elu mgbe emechara ahịa ， nwere ike ime ka ịdị mma ya zuo oke. Ebumnuche ọrụ anyị bụ: “ịtụkwasị obi maka ịdị mma, ahaziri ahazi”, anyị ga -enweta ọrụ ndị a maka ndị ahịa ọ bụla iji dozie nchegbu ndị a:
Ⅰ） Otu igwe ， otu faịlụ.
Ozugbo erere otu ọ bụla, nye ya ka ọ debe faịlụ kọmputa, ndekọ zuru ezu nke adreesị onye ahịa, ekwentị, ojiji nkeji na ihe ndị ọzọ;
Ngalaba ọ bụla nwere ndekọ ọrụ, enwere ike ịdekọ ya nke ọma ọrụ kwa ụbọchị nke otu ahụ;
Mgbe nrụnye na ọrụ nke ngalaba ruru eru anyị ga -ekenye kaadị akwụkwọ ikike;
Nye usoro nhazi ọrụ otu ọ bụla, mmezi kwa ụbọchị, mmezi teknụzụ bụ isi, mmezi teknụzụ nke abụọ, nhazi teknụzụ atọ na arụ ọrụ na usoro mmezi, nsuso oge niile;
Team Ⅱ） Ndị otu na -ahụ maka nlekọta ọrụ ngwa ngwa
Ndị otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa mgbe emechara bụ nchịkọta nke ọtụtụ ndị ọkachamara ọkachamara ọkachamara nke ndị injinia ọkachamara, nwere ngwa nnwale dị elu dị iche iche, akụrụngwa nnwale na ngwaọrụ pụrụ iche, na-enye ndị ahịa ọrụ awa 24.
1. Ụlọ ọrụ anyị na -enye oge akwụkwọ ikike nke afọ 1 ma ọ bụ 1000 awa ọrụ (nke ọ bụla buru ụzọ bịa) ， oge site na ụbọchị nrụnye akụrụngwa na mbubata ya na ngụkọta oge, n'oge oge akwụkwọ ikike, nke ụlọ ọrụ na -ahụ maka nrụpụta mmanụ dizel setịpụrụ akwụkwọ ikike ọkachamara. , na -ekwe nkwa mmepụta ụlọ nrụpụta nke ngwa;
2. Ụlọ ọrụ anyị kwere nkwa ： n'oge akwụkwọ ikike, natara ọkwa edere maka ọdịda ndị ahịa, oge mmezi mmezi nke ihe na -erughị awa 24, maka nsogbu mmejọ dị mfe, ndị ọrụ nka site na ekwentị na nkwukọrịta ndị ahịa iji duzie nsogbu ahụ; dị ka ekwentị. Ọ bụrụ na enweghị ike idozi nsogbu ahụ, ndị ọrụ aka ọrụ kacha ngwa ngwa gbagara ebe ahụ ka ndị ahịa nwee nsogbu, n'ozuzu ha anaghị karịa awa 24.
3. N'ime oge akwụkwọ ikike iji nye ọrụ ndozi uru ndụ niile;
4. Ndị na -ahụ maka nrụzi oge niile maka mmezi nke ngalaba ndị ahịa, dochie ngwa mma; otu ndị na -eme mkpesa mgbe niile ka ha jụọ maka ọrụ otu;
(Ⅲ) Ọzụzụ ndị ọkachamara, nkwado teknụzụ siri ike
1. Ndị otu ọrụ ire ere mgbe niile na-enweta ọzụzụ ọkachamara n'aka Shandong Weichai, Ji Chai, Shangchai, Cummins, Perkins, MAN, IVECO ， wee nweta asambodo nke ọrụ with na asambodo.
2. Ụlọ ọrụ anyị na-ahụ maka ọzụzụ n'efu maka ndị ahịa nọ na saịtị 2-3 na-arụ ọrụ ọkụ eletrik;
Guarantee Ⅳ） Akụkụ mapụtara nkwa
Ụlọ ọrụ anyị dị na mba ahụ nwere ụlọ nkwakọba ihe, nke enyere ndị ahịa nke akụkụ ahụ mapụtara na -esite na mbido mbụ, ịdị elu dị elu, ohere ịkwụ ụgwọ.
Nke gara aga: Ekwentị mkpanaaka, ụmụaka, ndị agadi
Osote: Ihe ịrịba ama ọpụpụ ọpụpụ kacha ewu ewu na Australia